Ciyaartoyda Chelsea Oo Helay Digniin Ku Aaddan Kulanka Manchester United Ee Axadda - Laacib
HomeWararka CiyaarahaCiyaartoyda Chelsea Oo Helay Digniin Ku Aaddan Kulanka Manchester United Ee Axadda
Ciyaartoyda kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa loo diray digniin ku aaddan kulanka horyaalka Premier League ee ay maalinta Axadda la ciyaari doonaan Manchester United, taas oo imanaysa xilli labada kooxood ku jiraan duruufo aad u kala fog.
Manchester United oo caydhisay Ole Gunnar Solskjaer ayaa ciyaari doonta horyaalka Premier League markii koowaad muddo saddex sannadood ah, waxaana si ku-meelgaadh ah ciyaartan usii laylinaya Michael Carrick oo guul ku hoggaamiyey kulankiisii koowaad ee Salaasadii ay kusoo garaaceen Villarreal, uguna gudbeen wareegga 16ka Champions League.
Red Devils ayaa u dhacday kaalinta siddeedaad markii ay Watford ku garaacday 4-1 Sabtidii, taas oo keentay in Ole Gunnar Solskjaer uu shaqada waayo.
Chelsea ayaa iyaduna kulankeedii ugu dambeeyey waxay si xun usoo karbaashtay Leicester City oo ay kusoo garaacday 3-0, halka Champions League ay ku karbaashtay Juventus oo ay afar gool iyo waxba ku garaacday.
Petr Cech oo ka tirsan masuuliyiinta Chelsea ayaa digniin u diray ciyaartoyda kooxdiisa, waxaanu u sheegay inay ku talo-galaan ciyaar xeeladaysan iyo koox doonaysa inay imtixaan adag ka gudubto oo ciddiyaha ku dagaallamaysa.
Cech ayaa yidhi: “Haddii aaanu nahay reer Czech, waxa aanu nidhaahnaa: “Qolka cusub, si fiican ayuu u xaadhmaa,” Mar kasta oo aad la ciyaarayso koox haysata tababare cusub, waa kulan xeeladaysan. Sidaas ayaanay samayn doontaa Manchester United marka ay Axadda nala ciyaarayso. Marka aad tababaraha beddesho, waa in aad mar walba samayso falcelin.”